U-Celine Dion ogqoke i-jumpsuit yengwe - Bonisa Ibhizinisi 2022
U-Celine Dion ogqoke i-jumpsuit yengwe
Umculi uCeline Dion ubangele igagasi lezingxoxo ezishisayo eduze komuntu wakhe. Konke kusolwa ngengubo yenkanyezi eneminyaka engu-49, asanda kuvela kuyo emigwaqweni yaseParis.
Izihlabani zomhlaba nezithonjana zesitayela ezaziwayo zinezimpawu zokubhoboza nezingubo ezingelula neze. Ukudumala okunjalo kwenzeka nakumculi uCeline Dion, osanda kuvakashela eParis njengengxenye yohambo lwakhe.
Ngemva kwekhonsathi ephumelelayo, inkanyezi eneminyaka engu-49 ubudala yanquma ukuhamba emigwaqweni edumile yedolobha lothando, kodwa yakhetha ingubo engavamile kakhulu ukuphuma.
I-paparazzi yakwazi ukuthola uDion lapho ephuma ehhotela ayehlala kulo. Umculi ubegqoke i-jumpsuit ye-tiger-print kasilika, ehlotshiswe ngokucebile ngoziphu nezinkinobho zensimbi esiswini.
Abagxeki bemfashini babize ukuphuma kukaCeline Dion njengokunganambitheki. Ngokombono wabo, ngenxa yalesi ngubo "i-tiger", isibalo esincane somculi sasibukeka singenasici futhi singenakulinganiswa.
Kodwa ukwahlulela ngezithombe zezintatheli ezivele zivele kuwebhu, uCeline ngokwakhe ujabule kakhulu ngesithombe sakhe. Wafosela abathwebuli bezithombe ngesizotha, futhi ukumamatheka akuzange kuphume ebusweni bakhe.
Indlela yokugqoka ingubo yengwe yemfashini ehlobo lika-2019
Ingubo ye-Leopard ehlobo lika-2019 yinto ezokuvumela ukuba ukhanye, ube nemfashini futhi ube wesifazane ngesikhathi esifanayo. Futhi ukuze ubukeke upholile kuwo, udinga ukukhetha izicathulo ezifanele nezesekeli
U-Tonya Matvienko waqhosha ngomuntu ogqoke ingubo yokubhukuda
Umculi u-Tonya Matvienko wabalekela isimo sezulu esibandayo, esinemvula futhi ngezinye izikhathi esikhithika phesheya. Manje intombazane ijabulela ilanga elifudumele laseGibhithe
UNaomi Campbell ogqoke i-bodysuit namasokisi wanqoba abalandeli - Isithombe
Imodeli edumile uNaomi Campbell ubonakale ebukeka kahle ezithombeni zangaphansi ze-Yamamay. Kuyathakazelisa ukuthi inkanyezi ye-catwalk ayizange nje isebenze njengemodeli, kodwa futhi yathuthukisa ukuklama kwamakhithi
USvetlana Loboda waqhosha ngomuntu ogqoke ingubo yokubhukuda ngesikhathi evakashele eCyprus
Umculi wase-Ukraine uSvetlana Loboda uchithe amaholide kaMeyi eCyprus. Wabelane ngezithombe ezigqamile eseholidini lakhe endaweni yokungcebeleka edume kakhulu ku-Instagram. Hhayi ngaphandle kwesithombe ku-swimsuit
U-Tatyana Litvinova wamangala ngomuntu ogqoke ingubo yakusihlwa kanokusho
Umethuli we-TV uTatyana Litvinova waqhosha ngomuntu owubukhazikhazi ogqoke ingubo yakusihlwa esesitayeleni, lapho ezovela khona esiqeshini sokugcina sohlelo "Master Chef 7"